Mafashoni echikadzi ezana remakore rechi17 - Hollar Engravings
History & Culture Nhoroondo dzevakadzi
Mafashoni echikadzi ezana remakore rechi17 - Hollar Engravings Dhirowa naWenceslaus Hollar, munenge muna 1645, achienzanidza nhoroondo yevakadzi yemafashoni, zana remakore rechi17, kubva pane zvoupenyu. Digital image © 2003 Jone Johnson Lewis. Inodisirwa kuNe.com.com.
Zvinyorwa naWenceslaus Hollar, munenge muna 1645
Pakati pezana remakore rechi17, Wenceslaus Hollar akabudisa mutsara uyu wezvinyorwa zvinoratidzira chikafu chevakadzi muEngland, vachitora maonero azvinoenderana nejasi revakadzi. Wenceslaus Hollar uyo akabudiswa kupfuura zviuru zviviri zvemafirimu, akanga ari muzana wezana remakore rechi17 akaberekerwa muPrague, uye akapedza nguva yakawanda yebasa rake muEngland.
Nemhaka yokuti mifananidzo iyi yakaitwa kubva muhupenyu hwehupenyu, iyo inokosha chaizvo semari yekutsvakurudza zvipfeko izvo vakadzi vakapfeka muzana remakore rechi17. Pane mashoma mashoma akadaro anowanikwa kune imwe nguva nguva isati yava yezana remakore rechi19, apo magazini evakadzikadzi akatanga kutora mifananidzo yefashoni uye apo mabhuku epapuro akabudiswa nemifananidzo yakawanda yezvokudya zvemazuva ano.
Mifananidzo yakazotevera mumutambo inoratidza kuwedzera kweEngland kuPuritanism, iyo yaisanganisira kuve nyore mumapfekero, misoro yepamusoro yakasanganisira makapu akareba kana hove huru sekuvhara musoro, uye mavara madema mumapfeeshe akaperekedzwa nemakwenzi machena nemapuroni. Sezvo Calthrop inotaura mukutenderera mashoko pamusoro penguva iyi yejasi, "frippery" yaenda, kana kuti zvishoma kuderedzwa.
Iyi mifananidzo yakashandurwa kubva pamakopi zvakare akanyorwa muChirungu Costume: Tudor uye Stuart naDion Clayton Calthrop, London, 1906. Calthrop chete mhinduro pamusoro pemifananidzo iyi yaiva iyi:
"Iyi mifananidzo yakanakisisa neHollar haifaniri kutsanangurwa, iyo inosanganiswa mubhuku rino nekuda kwekukosha kwavo sekururamisa kwemazuva ano."
Calthrop akafungidzira kuti vaverengi vaizoziva basa reHollar.
Pakati pezana remakore rechi17, Wenceslaus Hollar akabudisa nyaya idzi dzezvinyorwa zvinoratidzira mari yevakadzi muEngland.
Dhirowa 25 - Merchant's Daughter
"Mwanasikana weMurchant" - Pakazosvika pakati pezana remakore rechi17, Wenceslaus Hollar akabudisa mutsara uyu wezvinyorwa zvinoratidzira chikafu chevakadzi muEngland.
Dhirowa 26 - Mudzimai weMurchant weLondon
"Mudzimai weMurchant wokuLondon" - Mukatikati ezana remakore rechi17, Wenceslaus Hollar akabudisa nyaya idzi dzezvinyorwa zvinoratidzira mari yevakadzi muEngland.
Dhirowa 27 - Mudzimai weCitizen
"Mukadzi Wemudzimai" - Pakazosvika pakati pezana remakore rechi17, Wenceslaus Hollar akabudisa mutsara uyu wezvinyorwa zvinoratidzira mari yevakadzi muEngland.
Dhirowa 28 - Country Woman
"Nyika Mukadzi" - Pakazosvika pakati pezana remakore rechi17, Wenceslaus Hollar akabudisa mutsara uyu wezvinyorwa zvinoratidzira chikafu chevakadzi muEngland.
Dhirowa 29 - Shona Gentle Woman
"Shona Shona Gentle Woman" - Mukatikati mazana remakore rechi17, Wenceslaus Hollar akabudisa nyaya idzi dzezvinyorwa zvinoratidzira mari yevakadzi muEngland.
Dhirowa 30 - Noble Gentlewoman weEngland
"Noble Gentlewoman wekuEngland" - Mukatikati ezana remakore rechi17, Wenceslaus Hollar akabudisa nyaya idzi dzezvinyorwa zvinoratidzira mari yevakadzi muEngland.
Dhirowa 31 - Lady weDare reEngland
"Mukadzi weDare reEngland" - Pakazosvika pakati pezana remakore rechi17, Wenceslaus Hollar akabudisa mutsara uyu wezvinyorwa zvinoratidzira mari yevakadzi muEngland.
Dhirowa 32 - An Shona Lady weUnhu
"Mudzimai weChirungu weUnhu" -Pakati pezana remakore rechi17, Wenceslaus Hollar akabudisa nyaya idzi dzezvinyorwa zvinoratidzira mari yevakadzi muEngland.
The Glass Ceiling uye Women's History
Chii chinonzi Transcendentalism?
Catherine weAragon: King's Great Matter
Nushu, Mukadzi-Mutauro weChina chete
Vakadzi Nebasa mukutanga kweAmerica
Vakadzi vari Mukati - Nguva
A List of Eleanor of Aquitaine's Descendants Kupfuura Johane, Mambo weEngland
Mutemo weChigunwe uye Mutemo weMukadzi-Kurova
American Civil War: Hondo ye Wauhatchie
Zvakanaka Kukudya: Comic Zombie Movies
Nzira Yokuita Tombstone Rubbing
5 Nhoroondo dzeMadzinza Unofanira Kuverenga
Mashoko Akanyanyisa Pamusoro Pemazuva eHajj Mahedheni Okunamata
Waiva Nancy Pelosi Miss Lube Rack we 1955?
Mishonga Yekunamatira Yisina Siri Inoita Sei?
Pane "Mwedzi Wose Wakakwana" munaMuvhuro here?
Sei Kune Kurwisana Pakati peVaTutsi nevaHutus?
Massage Therapy uye Yako Yakadzokera
Kuchinja Kubva Kubva Pakudzika 10 kusvika kuGuru 2
African American Women in Race - 1902
Ndeipi Inopera Mamiriro Ehutano Ehutano hweMhuka Dzvuku?
20 Nyika dzakawanda dzinoparadzirwa muna 2050
Kuchinja Cubic Centimeters kusvika kuLiters
Zvinyorwa zveMitambo Yenhema uye Zvishamiso
Ndeipi Bikram Yoga Yakandidzidzisa pazera remakore 50
Pamusoro peSvondo weImba yeVamiririri
Simira-up Comedy muna 1990s
Nzira Yokusarudza Nayo Kubhabhatidza Zvakanaka Firita